Tattoos dzeHenna - Ndeupi mutengo wezvi zvigadzirwa zvenguva pfupi? | Kunyora
Tattoo dzeHenna, mutengo wavo ndeupi?
Susana godoy | | Mhando dzematatoo
ari Tattoo dzeHenna Ndiyo imwe yesarudzo huru kana tisingakwanise kuona tsono pamberi. Saka iri nyore nzira yekupfeka yakashongedzwa ganda. Saka nekudaro, zvinofanirwa kutaurwa kuti hachisi chinhu chisingaperi, asi iingi iyo inki inowanzo nyangarika munguva pfupi.
Muchokwadi, vamwe vaimbi vane mukurumbira vakavasarudzirawo mumitambo yavo. Iwe unogona kuwedzera akasiyana magadzirirwo kuganda rako pasina kutsungirira chero kurwadziwa. Nekudaro, maHenna tattoos ave imwe yeakanakisa sarudzo, asi ...Ndeupi mutengo wematatoo aya?.
1 Matato eHenna, anoitwa sei?
2 Zvinotora nguva yakareba sei kutora tattoo yaHenna?
3 Yakawanda sei iyo tattoo yeHenna inodhura?
4 Anotora nguva yakareba sei maHenna tattoos?
Matato eHenna, anoitwa sei?
Tinogona kutaura kuti patinotaura nezve henna tinozviita kubva parudzi rwepepa. Inowanikwa kubva mugwenzi uye inogadzirwa nemashizha nematavi anofanirwa kupwanywa. Kunyangwe dzimwe nguva dzimwe nguva inogona zvakare kuwanikwa kubva kumashizha akaomeswa uye kuasanganisa nemvura inopisa. Neiyi nzira, iyo inoguma inonamira yakatowanikwa, inova iyo inoshongedza ganda remunhu wega wega, maererano nedhizaini yakasarudzwa. Kubva zvino zvichienda mberi, sarudza dhizaini uye nzvimbo yatinoida ratidza. Zvakajairika kuzviona zvese pamaoko uye patsoka, asiwo kumusana kana kumhanya nepamaoko.
Unyanzvi hwacho hwakanyatsojeka uye ganda rakapendwa pasina chero kurwadziwa, nekuti iyo Henna inongogara kunze kweganda redu, ndiko kuti, nguva dzose pariri pasina kuribaya chero nguva. Dzimwe nguva tinoona kuti inki ine ruvara rutsvuku kana kuti inozoita brown uye inogona kuva zvinoenderana neruvara rweganda nenzvimbo yemuviri, saka inogona kusiyana kubva pamunhu kusvika pamunhu. Kamwe pasita parinoiswa, zvinotora nguva shoma kuti riome. Iyo yakanyoroveswa nekamwe muto wemooni neshuga. Nenzira iyi, iyo tattoo inonamira zvirinani kune ganda.
Zvinotora nguva yakareba sei kutora tattoo yaHenna?
Pano isu tinofanirwa kufunga nezve akati wandei ruzivo. Kune rimwe divi, iyo nzvimbo yekusarudza uye kune imwe, kukura kwetatoo. Nekuti maoko kana tsoka zvidimbu panowanzo kuve nyore kushanda. Nenzira imwecheteyo, tattoo yakapfava paminwe haina kufanana neruoko rwese uye chikamu chemaoko. Sezvo hupamhi hwayo, zvinoda imwe nguva yakati rebei. Semitemo, zvinonzi maitiro acho anobva pamaminetsi gumi neshanu apfuura awa. Asi kana iwe uchingoda rakareruka dhizaini muchanza cheruoko rwako, ipapo uchafanira kungomirira ingangoita maminetsi matanhatu.
Yakawanda sei iyo tattoo yeHenna inodhura?
Zvino kunouya mumwe wemibvunzo yatinozvibvunza isu zvakanyanya. Nekuti iyi tattoo yechinguva, saka tinofunga kuti haizodhura zvakanyanya. Kunyangwe chiri chokwadi kuti dhizaini dzinowanzo kuve dzakaomarara uye kujeka kunofanirwa kuve chimwe chezvikamu zvikuru zvemhedzisiro yakanaka. Mutengo weHenna tattoos uchave uri pakati pegumi kusvika makumi maviri euros. Ipo dzimwe dzichinyanya kuomarara, dzichasvika kusvika mazana maviri emaeuro. Asi hongu, ramba uchifunga kuti vane matemplate anowanikwa kuzviita, saka izvi zvichave zvakachipa. Kana iwe ukasarudza imwe dhizaini uye nzvimbo yauchazotora iri yakakura, ipapo mutengo unogona kuwedzera. Nezvinhu zvese izvi, hazvigoneke kuti isu tiuye nemutengo chaiwo.
Anotora nguva yakareba sei maHenna tattoos?
Tinoziva ndezvenguva pfupi, asi tinovada. Ndosaka tichida kuti vagare paganda redu kwenguva yakareba. Chokwadi ndechekuti mushure mekuomesa nzvimbo zvakanaka, nyora yakadaro inogona kugara pakati pemazuva masere negumi nemana. Mushure menguva iyoyo iwe uchaona kuti iyo tattoo inozonyangarika zvishoma nezvishoma sei. Wakagadzira dhizaini neiyi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Tattoo dzeHenna, mutengo wavo ndeupi?
Mavara ari nyore pane iyo clavicle
Euskadi Tattoo Musangano 2019, iyo tattoo chiitiko chinodzokera kuFicoba